Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ma Wo Bible Akenkan Nyɛ Enyigye | Mbabun Bisa Dɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Ecuador Mmum Kasa English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Georgian German German Mmum Kasa Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Maya Mfantse Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peru Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Turkish Turkmen Twi Tzeltal Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba (Alata) Zulu
Aberantsɛ bi a wɔfrɛ no Will kãa dɛ; “Sɛ innyim ɔkwan pa a wɔfa do kenkan Bible no a, ne kenkan botum ayɛ wo enyihaw dɛ.”
Ana epɛ dɛ ihu mbrɛ ibesi akenkan Bible no ama w’enyi aagye anaa? Nsɛm a ɔwɔ ha yi bɔboa wo.
Kenkan Kyerɛwnsɛm no ma ɔnyɛ dɛ gyama asɛm no sii no nna ewɔ hɔ bi
Fa w’adwen nyina dzi dza erekenkan no ekyir. Ibotum dze nyansahyɛ a odzidzi do yi ayɛ edwuma:
Fa Bible mu asɛm bi a epɛ dɛ isũa. Ibotum afa Bible mu asɛm bi anaa Nsɛmpa anan no ne fã bi. Sɛ epɛ so a, ibotum apaw Bible akenkan a wɔayɛ no dɛ drama a ɔwɔ jw.org do no bi.
Kenkan asɛm no. Sɛ epɛ a, wanko botum akenkan, epɛ so a enye w’ebusuafo anaa w’anyɛnkofo mbɔ mu nkenkan no dzen. Sɛ wɔfa Bible akenkan biara a, wobotum ahwɛ nyimpa dodow a wɔrekasa wɔ mu no na wɔaakyɛ ama hɔnho.
Nyansahyɛ a odzidzi do yi, sɔ no mu kor anaa dza ɔbor dɛm hwɛ:
Dza erekenkan no, ɔyɛ a dorɔw no mu nsɛm no bi. Anaaso dɛ, mbrɛ nsɛm no sisii ndzidzido ndzidzido no, woara so dorɔw no ndzidzido ndzidzido dɛmara. Sɛ iwie a, kyerɛw nsɛm bi wɔ mfonyin biara ase fa kyerɛkyerɛ dza ɔrokɔ do no mu.
Aber a akenkan obi a ɔbɔɔ bra pa ho asɛm ewie no, ibotum akyerɛw no suban nye ndwuma pa a ɔyɛe, nye afei nhyira a onyae no mu biara ahyehyɛ ho kama.
Sɛ erekenkan adze a, ma ɔnyɛ tse dɛ iritsie amandzɛɛbɔ asɛm bi. Ma ɔnyɛ tse dɛ mbrɛ asɛm bi esi na nkorɔfo bi robɔ wo mu. Hɔn a wɔwɔ akenkan no mu no, binom wɔ hɔ a, asɛm no fa hɔnho, binom so dze, wɔwɔ hɔ bi na asɛm no sii. Sɛ erekenkan dɛm nkorɔfo yi hɔn anomu asɛm a, ma ɔnyɛ tse mbrɛ iribisabisa hɔn nsɛm.
Nyimpa a erekenkan hɔnho asɛm no, sɛ hɔn mu bi ennsi gyinae bi a nyansa wɔ mu a, susu ho hwɛ dɛ, sɛ nkyɛ osii gyinae a nyansa wɔ mu a nkyɛ obowie no dɛn. Dɛ nhwɛdo no, susu mbrɛ Peter kãa dɛ onnyim Jesus no ho hwɛ. (Mark 14:66-​72) Ehwɛ a, ɔkwan pa bɛn na nkyɛ Peter botum afa do edzi dɛm tsebea yi ho dwuma?
Sɛ etse nka dɛ etum etwa dza esi no ho mfonyim yie wɔ w’adwen mu a, ɔno dze wankasa botum ayɛ drama wɔ dza akenkan no ho. Fa esuadze a yebotum enya wɔ asɛm no mu so ka ho.​—Romefo 15:4.
Ibotum akenkan Bible no ma aayɛ dɛ gyama asɛm no sii no nna ewɔ hɔ bi!
Sɛ edze w’adwen si ndzɛmba nketsenketse mpo do wɔ akenkan no mu, na isusu ho kɔ ekyir a, ibenya nsɛm bi wɔ mu a ɔtse akoradze a wɔdze ehunta. Nokwasɛm nye yi, ɔtɔ da a kasafua kor anaa ebien bi botum ama aatse Bible mu asɛm bi ase yie papaaapa.
Dɛ nhwɛdo no, fa Matthew 28:7 toto Mark 16:7 ho.
Ebɛnadze ntsi na Mark kãa dɛ ɔnnkɛkyɛr na Jesus eeyi no ho edzi akyerɛ n’esuafo no ‘nye Peter’?
Mbuae: Asɛm yi sii no, nna Mark nnyi hɔ bi; ntsi obotum aba dɛ Peter na ɔkãa dɛm nsɛm yi kyerɛɛ no.
Akoradze a esuma: Ebɛnadze ntsi na ɔbɛyɛ dɛ Peter nyaa akomatɔyamu aber a ɔtsee dɛ Jesus pɛ dɛ ohu no bio no? (Mark 14:66-​72) Ebɛn kwan do na Jesus daa no edzi dɛ Peter yɛ ne nyɛnko berɛbo? Ebɛn kwan do na ibotum esũasua Jesus na aakyerɛ dɛ ewɔ ɔdɔ mapa ma afofor?
Sɛ ekenkan Kyerɛwnsɛm no tse dɛ mbrɛ ewɔ hɔ bi na nsɛm no sisii, na eyɛ ho nhwehwɛmu kɔ ekyir a, Bible akenkan bɛyɛ wo dɛw dɛ!
“Ɔtɔfabi a, mefa tsir bi nna mayɛ ho nhwehwɛmu kesi dɛ mebɛtse ase. Sɛ meyɛ dɛm a, ɔyɛ me dɛ mbrɛ menya biribi fofor a memmfaa m’adwen nnkɔr do dɛm da. Ɔba no dɛm a, metse nka dɛ menya akyɛdze bi a nna monnhwɛ kwan.”​—Bonnie.
“Musũaa Ruth nwoma no, na medze Watchtower Library no yɛɛ ho nhwehwɛmu kɔr ekyir na iyi maa metsee nwoma no ase yie. Mepɛ dɛ obiara dze Watchtower Library no yɛ edwuma. Wɔaboa me ma mehu dɛ saana Bible akenkan botum ayɛ enyigye.”​—Timothy.
“Sɛ enye nkorɔfo bɔ mu kenkan Bible no a, ɔyɛ enyika dɛ. Obiara fa Bible mu nyimpa kor a, nna wɔakenkan no tse dɛ mbrɛ wɔreyɛ drama. M’enyi gye Bible akenkan a wɔayɛ no dɛ drama a ɔwɔ jw.org do no ho. Ɔma Bible akenkan no yɛ dɛ gyama nsɛm no sisii no nna mo wɔ hɔ bi!”​—Isabel.
Fa mona Fa mona Ebɛn Kwan Do Na Bible No Botum Aboa Me?​—Ɔfã 2: Ma Wo Bible Akenkan Nyɛ Enyigye
ijwyp asɛm 78